किशोर नेपाल, फाल्गुन ८, २०७५
अहिलेसम्मका लागि जनतालाई खुसी राखेको छु । मुन्द्रेको हास्यबोध र अभिनयको प्रशंसा गरेका छन् मानिसले । नभए कसरी टिक्थ्यो र मुन्द्रे ? राजनीतिमा भएको भए त उहिले नै फ्लप हानिसकेको हुने थिएँ । हास्य कलामा भएकाले अहिलेसम्म टिकेको छु । जनता र दर्शकको आशीर्वाद पाएको छु, खुसी छु । पुरा पढ्नुहोस्
अनोज रोक्का, फाल्गुन ८, २०७५
युट्युब मेरो जननी हो, जहाँबाट मैले क्यामेरा फेस गर्न सिकें, आफ्नो क्रिएटिभिटी देखाउन पाएँ । फलस्वरूप सबैको साथ पनि प्राप्त भयो । पहिलो चलचित्रबाटै पाएको यो अभूतपूर्व मायालाई आफ्नो विश्वास र सम्भावनाका रूपमा लिएको छु । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , फाल्गुन ८, २०७५
यसको फ्रन्ट डोरमा २७ इन्चको पारदर्शी एलसीडी डिस्प्ले छ, जसको सहयोगले आफूलाई आवश्यक सामग्री छनौट गर्न सकिन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडाको वाक्स स्ट्याच्यु अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित मेडम तुसाद म्युजियममा सजिइसकेको छ । त्यससँगै प्रियंकाको स्ट्याच्यु अब लण्डन, सिड्नी, बैंकक तथा सिंगापुरमा पनि सजिनेछ । बलिउडमा देसी गर्ल उपनामले प्रख्यात प्रियंकालाई अचेल ग्लोबल आइकन पनि भनिन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
कर्मा ब्यान्डका सुरेन्द्रमान सिंह हालै टेक्सासको एउटा कार्यक्रममा भेटिए । सात वर्ष भैसकेछ लोकप्रिय नेपाली पप ब्यान्ड कर्माका गायक सिंह अमेरिका बस्न थालेको, तर धेरैलाई त्यसको अत्तोपत्तो छैन । अमेरिकामै बसेर पनि उनी कन्सर्टका लागि विभिन्न देश पुगिरहेका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
कृष्ण भट्टराई, फाल्गुन ८, २०७५
मिस नेपाल वल्र्ड–२०१८ को उपाधिसँगै श्रृंखला खतिवडा देशकै चर्चित सेलिब्रेटी बन्न सफल भइन् । चीनमा सम्पन्न मिस वल्र्ड–२०१८ मा उत्कृष्ट प्रस्तुति दिएसँगै उनी नेपालीमाझ मात्र होइन, विश्वभर नै चर्चामा आइन् । समाजसेवामा समेत रुचि राख्ने श्रृंखलाले मकवानपुरको चेपाङबस्तीमा पुगेर सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य अभियानले धेरैको मन जितेको छ । पुरा पढ्नुहोस्
डा. राजेन्द्र भद्रा, फाल्गुन ८, २०७५
गुदद्वारमा बढी हानिकारक किटाणु हुने भएकाले संक्रमण नसरोस् भनेर कन्डमको नियमित तथा सही प्रयोग उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । योनिमा जस्तो प्राकृतिक चिप्लोपन नहुने भएकाले कन्डमलाई बिगार नगर्ने किसिमको चिप्लो पदार्थ प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ । पुरा पढ्नुहोस्
नरेन्द्र रौले, फाल्गुन ८, २०७५
मलाई प्रदीप खड्काको सबै कुरा राम्रो लाग्छ । उहाँ ह्यान्डसम हुनुहुन्छ । उहाँको अभिनय, बोल्ने शैली तथा पर्सनालिटी सबै मन पर्छ । यदि उहाँसँग भेट भयो भने म तपाईंको फ्यान हुँ भनेर सेल्फी खिच्थें र त्यो तस्बिरलाई फ्रेममा हालेर आफ्नो बेडरुममा सजाउँथे । पुरा पढ्नुहोस्
नेपाली कथानक चलचित्र ‘साइँली’को नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ । चलचित्रको ‘प्याट प्याटे’बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको हो । हर्क साउदले लेखेको उक्त गीत सुशान्त गौतमले गाएका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
अभिनेत्री नीता ढुङ्गानाले २ वर्ष अघि चलचित्र निर्माणको घोषणा गरिन् । चलचित्र घोषणा गरेको २ वर्षपछि नीताले लगानी गर्ने मान्छेको अभावमा आफ्नो चलचित्र रोकिएको बताएकी छिन् । पुरा पढ्नुहोस्